Nhau - Gallic Acid Kugadzirira
Iyo acid acid hydrolysis nzira inonyanya kugovaniswa kuita-nhanho nzira uye maviri-nhanho nzira. Iyo huru nzira yekuyerera kwematanho-maviri gadziriro yegalic acid mbishi zvinhu → inopisa mvura yekuchera → firita zvakasara → tannin aqueous solution yekumanikidza kune angangoita 20% → acid hydrolysis → kutonhora crystallization → centrifugation kuwana chisina kuchena chigadzirwa → chisina kuchena chigadzirwa kuputswa uye marasha decolorization → mushure mekusefa Kutonhora uye crystallization → centrifugation → kuomesa → yakapedza chigadzirwa chegallic acid. Iyo-nhanho maitiro ekugadzirira gallic acid inobvisa kudiwa kweimwe nhanho ye leaching cyanine ichienzaniswa neayo maviri-nhanho maitiro. Inowedzerwa zvakananga neacid hydrolysis, ichibvisa kukosha kwekupwanya, leaching, kuisa pfungwa uye mamwe maitiro, kupfupisa iyo kutenderera kutenderera, uye nzira yekugadzirisa uye dhizaini yezvigadzirwa zvine musoro Zvinokwanisika, kuvandudzwa kwezvigadzirwa kwayo kwawana mabhenefiti akanaka, uye yakawanikwa nzira yekubuda kune zviwanikwa zvesango munzvimbo dzemakomo.
Nekudaro, iyo sulfuric acid inoshandiswa munzira yeasidhi hydrolysis yakasimba asidi, iyo inokanganisa michina kumadhigirii akasiyana. Kunyangwe zvese zviri zviviri firita yekuita uye firiji yakagadzirwa nesimbi isina simbi, nekuda kweiyo yepamusoro yekupisa tembiricha uye yakakwira acid kusangana, iyo ngura iri pachena, iyo inokanganisa zvakananga hupenyu hwebasa remidziyo.
Alkaline hydrolysis ndeyekuita hydrolyze iyo mbishi yakatorwa dhisiki, iyo, aqueous tannin solution pasi pealkaline mamiriro, uye wozodzikamisa uye acidize neacid kuburitsa gallic acid.
Iyo huru nzira inoyerera mbishi zvinhu → kupisa kwemvura inopisa → alkali hydrolysis → acid neutralization → kutonhora crystallization → centrifugation kuwana chisina kugadzirwa chigadzirwa → chisina kugadzirwa chigadzirwa kuputswa uye marasha decolorization → kusefa uye crystallization → centrifugation → kuomesa → gallic acid chigadzirwa.
Inofananidzwa neacid hydrolysis nzira, iyo alkaline hydrolysis nzira haina kukuvadza pamidziyo uye inoderedza zvakanyanya kudzikisira kwemidziyo, asi maitiro acho akaomesesa kupfuura iyo acid hydrolysis nzira. Mazhinji epamba kugadzirwa kweaclic acid anoshandisa alkaline hydrolysis. 
Iyo nzira yekuvirisa inoshandisa microorganisms yekuvirisa mune aqueous mhinduro ine tannins, uye inoshandisa glucose mumatannin senge kabhoni sosi yekukura uye kubereka kweiyo microorganisms. Ma enzymes anokonzerwa nehutachiona anokonzera hydrolysis yetannin.
Maitiro ekuyerera Gaya mbishi zvigadzirwa kune dhayamita isingasviki 10mm → kuongorora kunze kwechipukanana upfu → kunyudza mumvura kukwidza 30% tannin solution → wedzera dema muforoma marudzi → kuvirisa kwemazuva 8-9 mazuva ese - kusefa → kugeza → isina kuchena gallic acid → kupera uye kudzokororazve → indasitiri gallic acid.
Dambudziko guru munzira yekuvirisa ndeyekuti kuumbwa kwemakemikari enzou uye iyo hydrolysis yetannins inoitwa mune imwechete yekuita mudziyo, uye mamiriro ezvinhu acho anonetsa kusvika kune akakwana mamiriro, zvichikonzera kuita kwenguva refu kutenderera (anopfuura matatu Mazuva), isina kukwana hydrolysis yetannins, uye masara tannins Kusvikira ku15% ~ 20%.
Nekuda kwekukanganisa kwenzira yekuvira, kutsvagurudza pamaitiro matsva enzymatic akagadzirwa pamba nekunze. Chinokosha kune iyo enzymatic nzira ndeyekuongorora uye kugadzirira zvine hunyanzvi hweiyo enzymes. Tanninase ndeye acetyl hydrolase, inova yekuwedzera inokonzera acyl hydrolase, iyo inogona nenzira kwayo, kunyanya, uye kubvarura iyo ester bond, depsil bond uye glycosidic bond mune tannin mamorekuru ekugadzira gallic acid. Pasi pemamiriro akakodzera, akasiyana maumburu uye inducer tannins anogona kuburitsa tannase. Iyo inowanzoshandiswa strain ndiAspergillus niger.
Maitiro kuyerera Enzyme yembeu kurima → kuvirisa enzyme kugadzirwa → (kuwedzera mbishi zvigadzirwa) hydrolysis → kusefa firiji → kuisa mukati → coarse crystallization → kupatsanura → decolorization → primary crystallization → sekirstallization yechipiri → kuomesa → kupwanya → kupera gallic acid.
Inofananidzwa nenzira yekuvirisa, iyo enzymatic nzira yakapfupisa kwazvo nguva yekuita, iyo tannin hydrolysis yekushandura mwero inodarika 98%, uye indekisi yekushandisa uye mutengo wekugadzira wakadzikiswa zvakanyanya.